DIODE LASER Bvudzi RINOBvisa Factory - China DIODE LASER Bvudzi RINOBvisa vagadziri, vatengesi
Yakakurumbira Vascular tambo Spider Veins kubvisa 980nm diode laser kurapwa muchina RBS07
Vascular maseru anotora yakakwira-simba laser ye980nm wavelength, solidification inoitika, uye pakupedzisira yakaparara. Kukunda echinyakare Laser kurapwa redness yakakura nzvimbo yekutsva ganda, nyanzvi dhizaini ruoko-chidimbu ..
Nd yag Q-Chinja uye Bvudzi Removhiya Feature 808 diode laser zvachose bvudzi kubvisa E9DQ
Iyo Diode 808 Laser ndiyo muyero wegoridhe muPermanent Hair Removal uye inokodzera pane ese ane pigmented bvudzi nemhando dzeganda - kusanganisira ganda rakasvinwa. Iyo 808nm padhuze ne infrared laser ndiyo yakanakisa yekutora melanin kuitira kuti inyatso shanda munzvimbo dzakasiyana dzeganda.
Singal Bata 3 Wavelength 755nm 808nm 1064nm Diode Laser Bvudzi Kubvisa Y9 Pros
Seyakagadziriswa mhinduro, TERMINATOR 808 + inosanganisa mabhenefiti eese matatu wavelengths 808nm 755nm 1064nm, 3 wavelengths ane akasiyana laser maitiro
1600W Soprano Ice Platinum 755 808 1064 Diode LASER Bvudzi Kubvisa Y9 Pro
Diode laser yekubvisa bvudzi tekinoroji kunoenderana nesarudzo yekuchinja kwechiedza uye kupisa. Iyo laser inopfuura nepakati peganda kuti isvike pamudzi webvudzi follicles.
Permanent Bvudzi Kubvisa 808nm Diode Laser Vertical Y2
Munguva yekurapwa kweLaser bvudzi, mwenje unopfuura nepaganda uye unosanganiswa nemelanin iri mune shaft yebvudzi.
Newest diode laser 755 808 1064 Laser bvudzi kubviswa 808nm diode laser bvudzi kubvisa muchina Y8B
Newest diode laser 755 808 1064 Laser bvudzi kubvisa muchina kuri kutonhora kuburikidza nehunyanzvi hunyanzvi, kuitira kuti kurapwa kwemusoro kune yakashata tembiricha, kusiyana nedzimwe laser inopisa ganda, kuchengetedza zvirinani ganda.
Chinyowani 808nm Diode Laser Bvudzi Kubvisa Mushini Werunako Salon Y9A
Iyo laser simba panguva iyoyo yekunyatso pinda yakakwira yevasungwa yeepidermis, dermis layer ye pigment kusvika mapoka, ichive inoenderana pigment yekumwa.
Hot kutengesa ine simba 808nm diode laser yekubvisa bvudzi muchina Y9C
Laser epilator inotakurika isiri chiteshi diode laser laser 808nm zvachose laser bvudzi kubvisa muchina Y9D
Iyo Diode 808 Laser ndiyo muyero wegoridhe muPermanent Hair Removal uye inokodzera pane ese ane pigmented bvudzi nemhando dzeganda - kusanganisira ganda rakasvinwa.
Portable 980NM diode laser yekusingaperi bvudzi kubvisa runako muchina RBS02
980nm laser ndiyo yakanakisa yekumwa masekonzi ePorphyrin vascular maseru. Vascular maseru anotora yakakwira-simba laser ye980nm wavelength, solidification inoitika, uye pakupedzisira yakaparara.